Otu esi ahụ onye na-ese ihe na isiokwu nke egwu na-enweghị ngwa mpụga na iOS na gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
Etu esi ahụ onye na-ese ihe na isiokwu nke egwu na-enweghị ngwa mpụga na iOS na gam akporo
Taa ọtụtụ n’ime anyị ka eji eji amata egwu na omenka site na ngwa ndị ọzọ mgbe anyị na-ege ha ntị, mana enwere ụzọ dị mfe iji mee nke a n’ejighị ngwa ndị ọzọ. Nke a nwere ike iyi ihe ijuanya na nke ọhụrụ abụghị ma ọlị ma anyị nwere nhọrọ a na ngwaọrụ mkpanaka anyị ogologo oge, iji nye gị ntụzi aka anyị ga-agwa gị na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agadi dị ka nke anyị iOS na gam akporo ọkachamara.
Site na egwu gara aga, ọtụtụ ga-amatalarị azịza ya. O nwere ike ịbụ na ọtụtụ n'ime gị ejirila usoro a mata egwu na onye na-ese egwu nke egwu na-egwu n'oge ahụ na ekwentị gị, mana n'ezie enwere ọtụtụ ndị ọrụ na-amabeghị nhọrọ a dịnụ yana anyị na-emeghachi , ọ dịghị echichi chọrọ site na ngwa ọ bụla nke atọ. N'ụzọ ezi uche dị, ịchọrọ njikọ netwọk iji mezuo ihe a, mana nke a bụ ihe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ taa onye ọ bụla nwere ama nwere.
1 Esi lee onye omenkà na isiokwu nke egwu na iOS
2 Esi lee onye omenkà na isiokwu nke abụ na gam akporo
3 Ngwa ndị ọzọ na-arụ ọrụ nke ọma mana ọ dịghị mkpa
Esi lee onye omenkà na isiokwu nke egwu na iOS
Nzọụkwụ ndị ahụ dị mfe mana o doro anya na ịchọrọ ịma ha. Ihe mbu anyi kwesiri ima bu na ozugbo na jiri olu nke anyi anyị nwere ike ịmata nke song na-akpọ, na-ese na ndị ọzọ na data.
Ọ dị mfe na ngwa ngwa, ihe mbụ anyị ga-eme bụ ịkpọku onye enyemaka Siri nke iPhone, iPad, iPod Touch ma ọ bụ ọbụlagodi Mac. N'oge ahụ anyị ga-ajụ ajụjụ a: Kedụ egwu na-akụ? ọ ga-azaghachi na: «Ka m gee ntị ...» Naanị n’oge ahụ ka anyị nwere ike iweta ngwaọrụ ahụ ntakịrị nso na ọkà okwu ma ọ bụ ebe a na-akụ egwu ahụ na ozugbo sekọnd ole na ole ọ ga-amata abụ na onye dere ya.
N'ihe banyere onye inyeaka Apple Siri, na mgbakwunye na ịnye aha onye na-ese ihe na isiokwu ahụ, ekele maka ngwa Shazam, ọ na-enye anyị ohere ịzụrụ egwu ma ọ bụ gee ya ntị site na ọrụ egwu gụgharia akwụ ụgwọ ya, Egwuregwu Apple. Otu nkọwa iburu n'uche bụ na na elu ihe oyiyi jide ya, ọ bụ n'ụzọ ezi uche dị na ya gbanwee. Nke mbụ anyị na-akpọku Siri ma ọ na-ege ntị ma na-enye data ahụ, elela anya na usoro nke njide ebe ọ bụ na ọ bụ ụzọ ọzọ gburugburu.
Esi lee onye omenkà na isiokwu nke abụ na gam akporo
Ugbu a, anyị ga-eme otu ihe ahụ anyị mere na iPhone ma ọ bụ iPad na iOS mana iji ngwaọrụ gam akporo. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ otu ihe ahụ ka anyị mere mana iji Google onye enyemaka site na iwu olu «Ok google«. Ozugbo a na-akpọ ọkachamara ahụ ka anyị jụọ otu ajụjụ ahụ anyị mere na iOS, kedụ egwu bụ nke a?
Dị ka ị pụrụ ịhụ na Google nnyemaaka anyị nwekwara ihe ọmụma nke tọhapụ ụbọchị, genre nke music nwe na ya nwere ike na-akọrọ mfe site na ịpị na ala. Sistemụ abụọ na-enye ọsọ na ịdị mfe nke n'ọtụtụ ngwa maka mata egwu anyị enweghị. Anyị nwere ike ịsị na nke a bụ nhọrọ kachasị mma maka ịmara abụ na onye na-ese ihe na-ada ụda ma na-arụ ọrụ n'ụzọ dị mfe.
Ngwa ndị ọzọ na-arụ ọrụ nke ọma mana ọ dịghị mkpa
Anyị maara nke ịdị adị nke ngwa ndị ọzọ nke ahụ nwere ike ịrụ ọrụ a na ọbụlagodi nhọrọ ndị Apple ma ọ bụ ndị enyemaka Google nyere, mana enweghị obi abụọ ọ dị ọsọ ọsọ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ikpe niile iji jụọ onye enyemaka aka ozugbo egwu a na-egwu n'oge ahụ na, karịa ihe niile, ego nke ozi dị ukwuu ọ na-enye. Dịka m na-ekwu, anyị enweghị ike ịmepe "egwu" egwu ozugbo na ọrụ egwu kachasị amasị anyị dịka anyị nwere ike ịme ụfọdụ ngwa, mana nke a bụ opekata mpe maka ọtụtụ ndị ọrụ.
The ihe ọma banyere iji usoro a na mgbakwunye na mfe na ngwa ngwa Ihe ọ bụ, bụ na ọ na-enye onye ọ bụla ohere ịhụ ihe egwu na-egwu ebe ọ bụla na-enweghị ibudata ngwa na smartphone. The wizards arụnyere na kọmputa natively ya mere ọ dị mfe iji ha maka ọrụ ndị a nakwa ọtụtụ ndị ọzọ.
You maara aghụghọ a? You jirila ya mbụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Etu esi ahụ onye na-ese ihe na isiokwu nke egwu na-enweghị ngwa mpụga na iOS na gam akporo
Sọpụrụ na-ewetara Honor 9X Pro, Ime Anwansi Lelee 2 na Ime Anwansi Earbuds maka Spain
Black Shark 3 na Black Shark 3 Pro, ndị isi na Europe, ndị a bụ njirimara ha na ọnụahịa ha